musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tunisia Kupwanya Nhau » Zvitima Zvinosangana muTunisia Kubva paMakumi matatu kana Zvimwe Zvakakuvara
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Rail Kufamba • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Tunisia Kupwanya Nhau
Zvitima zviviri zvakabonderana muTunisia nhasi, China, Gumiguru 7, 2021, zvichisiya vanhu vanosvika makumi matatu vakakuvara. Vakakuvara vakaendeswa kuzvipatara zviviri zviri pedyo.
Kubondana kwakaitika kumucheto kweTunis, guta guru reTunisia, munzvimbo yeMegrine Riadh yeBen Arous.
Pakave nekumwe kurovera kwechitima munguva pfupi yapfuura muTunisia zvichikonzera kufa nekukuvara.
Chakaipisisa chaive muna 2015 pakaurayiwa vanhu gumi nemapfumbamwe uye vangangosvika zana vakakuvara mushure mekunge chitima chabonderana nerori.
Tsaona yakaitika munzvimbo yeMegrine Riadh yeBen Arous, kunze kweguta guru reTunis. Pakave paine akati wandei echitima macashes munyika makore apfuura.
Musi waZvita 28, 2016, pakave nekubonderana pakati pechitima nebhazi raishandiswa ne Nabeul Gavhuna Dunhu Rekutakura Corporation. Kubonderana kwakaitika paNational Road 1 muSidi Fathallah, nharaunda muDjebel Jelloud padyo neguta guru reTunis. Vanhu vashanu vakafa uye vanhu makumi mashanu nevaviri vakakuvara mutsaona iyi. Pakati peavo vakafa, paive ne5 Tunisian Armed Forces mahofisi, Anti-hugandanga Brigade mumiriri, uye mukadzi nemucheche.
2015 kupunzika kwechitima
Mushure mekuferefetwa nebazi rezvekutakurwa kweTunisia, chikonzero chakananga chakataurwa cheiyo 2016 kudhumhana yaive yakanyanya kumhanyisa kwemutyairi webhasi uye kushomeka kwekutarisa kune alarm yezwi yakapihwa nechitima. Zvisinganetsi, kunonoka kugadzirisa kukanganisa kwechitima uye chinodzivirira otomatiki pamwe nekushomeka kwekubatana pamwe nezviremera zvine chekuita nekudiwa kwemasaini kwenguva pfupi uye kusavapo kwemurume akachengeteka pamharadzano zvakataurwawo sezvikonzero zvekupunzika.
Kubondana kwakaipisisa kwakaitika muna Chikumi 2015 pakaurayiwa vanhu gumi nemapfumbamwe uye makumi mapfumbamwe nevashanu vakakuvara. Kubonderana kwakaitika pakati pechitima nerorori muEl Fahs, Tunisiya. Chikonzero chikuru chetsaona iyi kwaive kushomeka kwedziviriro padanho rekuyambuka.
Musi waGunyana 24, 2010, Chitima cheBir el-Bey chakabonderana nechimwe chitima chaiuya kubva kuSfax yeTunisia ichikonzera kudzikisira nekupunzika mushure mekurohwa neimwe chitima pangoro yemuswe pachiteshi chechitima. Tsaona iyi yakakonzera kufa kumwe uye makumi mashanu nenomwe vakakuvara. Chikonzero chekupunzika kwaive kusanyatso kuoneka nekuda kwedutu rine mvura.
Kuferefetwa kuri kuvhurwa neTunisian National Railways Kambani kuti itarise mamiriro ezvinhu akapoteredza kudhumhana kwanhasi uye kutsvaga avo vane basa.